Ngaba ukuthengisa umsitho kukonyusa njani ukuKhokelela kweRhafu kunye neRhafu? | Martech Zone
Iinkampani ezininzi zichitha ngaphezulu kwe-45% kuthengiso lwayo kunye nentengiso kuhlahlo-lwabiwo mali ukuthengisa umcimbi kwaye elo nani liyanda, alinciphi ngaphandle kokuthandwa kwentengiso yedijithali. Akukho mathandabuzo engqondweni yam ngamandla okuzimasa, ukubamba, ukuthetha, ukubonisa, kunye nokuxhasa iminyhadala. Uninzi lwezona zikhokelo zixabisekileyo zabaxumi bethu ziyaqhubeka nokuza ngokwazisa-uninzi lwazo kwimisitho.
Yintoni ukuThengisa uMnyhadala?
Intengiso yomsitho yinkqubo yokuphuhlisa umboniso, ukubonisa, okanye ukubonisa ukukhuthaza imveliso, inkonzo, okanye injongo. Ukuthengisa umsitho lithuba lokubonisa ishishini lakho ngokukhanya okutsha kubathengi. Ungabonisa uphawu lwentengiso kunye neshishini lakho, kunye nokwenza amava amatsha kubathengi bakho. NCC
Ukulungelelanisa ubudlelwane bakho noluntu, ukuthengisa ngokwamanani, kunye imizamo yemidiya yoluntu ngentengiso yomsitho iya kuvelisa iziphumo ezingcono. Le infographic evela kwi-NCC, inkampani yokufunda kwi-Intanethi enikezela nge idiploma yolawulo lomsitho, ibonelela ngegalelo kuyo yonke imiba yentengiso yomsitho, kubandakanya:
Ukuthengisa umsitho iinzuzo
Intengiso esebenzayo qhinga
Ukunyusa amandla ukuthengiswa kwedatha ngentengiso yomsitho
Ukunyusa amandla ukuthengisa umcimbi ngentengiso yedijithali
Ukukhuthaza ngokubanzi kwiintengiso ngentengiso yomsitho
Ukuphucula ukuthengisa umcimbi wakho
Nantsi infographic evela kwi-NCC, Ukuphumelela kweNtengiso yoMnyhadala okunokuKhulisa iZantsi lakho:
tags: umboniso womsithoukuthengisa umcimbiidiploma yentengisointengiso yomnyhadalaumboniso womsithobonisekwi-infographicimisitho yentengisonccyokufunda online